Donald Trump: Waan isku wadi doonaa ganacsigeyga iyo madaxtinnimada - BBC News Somali
Donald Trump: Waan isku wadi doonaa ganacsigeyga iyo madaxtinnimada
Image caption Trump waxa uu shalay wareysi siiyay wargeeyska The New York Times
Donald Trump ayaa sheegay in qaanaanuunka dalka Mareykanka uu u oggolaanayo inuu isku wada ganacsigiisa iyo shaqada madaxtinnimada Maraykanka.
Waxaa soo baxayay walaac laga muujinayo suurtagalnimada inay labadaasi arrimood is khilaafi karaan marka uu Trump la wareego Aqalka Cad bisha Januray.
Xubno ka tirsan Senetka Mareykanka ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan soo saaridda qaraar ka dalbanayo madaxweynaha la doortay inuu dad kale ku wareejiyo ganacsigiisa, si looga baaqsado in madaxweynaha macaash ka sameeyo xafiiska.
Madaxweynayaashi hore ee dalka Mareykanka waxaa ay doorbideen in ay kala saaraan ganacsigooda iyo howlaha dowladda iyagoo howlahooda gaarka ah u dhiibtay dad ka madax banaan shaqooyinka dowladda.
Weriye ka tirsan BBC-da oo ku sugan Washington ayaa sheegay inuusan jirin sharci ama xeer ku khasbayo Trump inuu meel iska dhigo howlahiisa gaarka ah. Waxaa haseyeeshee laga yaabaa in Trump uu wajaha cadaadis haddi uu ku guul dareysto in uu kala saaro danaha Mareykanka iyo tiisa gaarka ah.
Wareeysi uu siiyay wargeyska The New York Times ayuu Trump ku sheegay in uu isku wadi doono maamulka dowladda iyo howlihiisa gaarka ah.